laacib » Alisson Becker Oo Magacaabay Labada Goolhaye Uu Doonayo In Uu Dhaafo Si Uu U Noqday Goolhayaha Aduunka Ugu Fiican.
Alisson Becker Oo Magacaabay Labada Goolhaye Uu Doonayo In Uu Dhaafo Si Uu U Noqday Goolhayaha Aduunka Ugu Fiican.
Kooxda Liverpool ayaa xagaagii la soo dhaafay ku guulaysatay in ay lacag rekoodh jabis ahayd kula soo wareegtay goolhayaha xulka qaranka Brazil ee Alisson Becker kaas oo wax badan ka badalay xaaladii goolhaye ee ay Reds sanado badan ku soo jirtay.
Alisson Becker ayaa loo arkaa in uu haddaba ka mid yahay goolhayayaasha ugu fiican kubbada cagta balse waxa uu magacaabay labada goolhaye ee uu doonayo in uu dhaafo si uu u noqon karo goolhayaha aduunka guu fiican.
Dhawaan ayay ahayd markii ay Buffon iyo Ikar Casillas fureen dooda goolhayayaasha aduunka ugu fiican markaas oo uu Buffon tilmaamay in Manauel Neuer, David De Gea iyo Jan Oblak yihiin saddexda goolhaye ee ugu fiican halka Casillas uu ku dooday in Jan Oblan iyo Ter Stegen yihiin labada goolhaye ee ugu fiican.
Haddaba Alisson Becker ayaa taageeray fikradii Casillas wuxuuna sheegay in Jan Oblak oo ka tirsan Atletico Madrid iyo goolhayaha Barcelona ee Ter Stegen yihiin labada goolhaye ee uu doonayo in uu dhaafo si uu u noqon karo goolhayaha aduunka ugu fiican.
Goolhaye Alisson Becker ayaa hadalkiisa ku bilaabay: “Anigu waxaan jecelahay Oblak, isagu waa midka aan sida aadka u dhaw ula socdo iyo Ter Stegen. Labadooduba waa kuwo fiican”.
Alisson ayaa tilmaamay in ay jiraan goolhayeyaal kale oo fiican balse waxa uu Jan Oblak iyo Ter Stegen u arkaa in ay cid walba hadda ka sareeyaan wuxuuna yidhi: “Kuwo kale ayaa jira, laakiin halkan kuwaas ayaa ah kuwa waxa dheeraadka ah muujinaya”.
Alisson Becker oo amaanaya Oblak iyo Ter Stegen ayaa yidhi: “Waxay leeyihiin heer farsamo oo aad u sareeya, sidoo kale diirada saarid aad u saraysa, waxay sare u qaadayaan heerka tartanka u dhexeeya goolhayayaashayada. Waa tartan caafimaad qaba si loo arko midkyaga noqda kan ugu fiican dhamaadka sanadka”.